Alshabaab oo xalay weerar ku qaaday Garoonka Diyaaradaha Kismaayo. | Salaan Media
Alshabaab oo xalay weerar ku qaaday Garoonka Diyaaradaha Kismaayo.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee gobolka J/hoose ayaa sheegaya in xalay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ay soo weerareen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, iyadoo ciidamada AMISOM/Kenya iyo maleeshiyaadkaasi uu dhex maray dagaal socday ku dhowaad muddo ka badan hal saac.
Sida uu sheegayo goob jooge ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalay ku weerartay garoonka hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan madaafiicda garabka laga tuuro iyo kuwa goobta.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in qaar ka mid ah madaafiicda la isweydaarsanayay ay guryaha ugu galeen dad rayid ah, inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn qasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaaray madaafiicdaasi.
Ciidamada maamulka KMG ah ee magaalada Kismaayo oo kaashanaya kuwa AMISOM/Kenya ayaa saaka sameeyay howlgallo lagu baadi goobayo kooxihii ka dambeeyay weerarkii xalay ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale weerarka xalay loo geystay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii saddexaad ay ku xaniban yihiin wasiiro ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo maamulka Kismaayo ka arrimiya uu si cad u diiday inay wasiiradu gudaha u galaan magaaladaasi Kismaayo, iyadoo tallaabadaasina ay sii xoojisay khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo maamulka muranka dhaliyay ee Jubbaland.